Bridge of Spies (2015) – KZ’s ကြည့်မိသမျှ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Arts & Humanities » Bridge of Spies (2015) – KZ’s ကြည့်မိသမျှ	20
Bridge of Spies (2015) – KZ’s ကြည့်မိသမျှ
Posted by ဇီဇီ on Feb 28, 2016 in Arts & Humanities, Creative Writing, Entertainment, Movies/TV | 20 comments
Bridge of Spies ကြည့်ပြီးသော်…..
သို့နှယ် ဖြစ်ရပ်မျိုးး ရွှေပြည်ကြီးတွင် ဖြစ်မည်ဆိုပါက …
၁) သူလျှို ဟု ယူဆထားသူ ကို ဖမ်းရာနေရာတွင် ဒေါသထွက်နေသော လူအုပ်ကြီးး လက်ချက်ဖြင့် ထို သူလျို အသက်ထွက်နိုင်သည်…
၂) သို့တည်းမဟုတ် လဝက မှ ထုတ်ပေးထားသော နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးးကဒ်ပြားပြပြီးး ရဲများကို ငွေပေးကာ လွတ်မြောက်နိုင်သည်….
၃) သို့မဟုတ် အချုပ်ကျကာလ အတွင်းး ထွက်ချက်ရရန်စစ်ရာမှ လက်လွန် သဖြင့် ထို သူလျို တရားရုံးးထိ ရောက်မည် မဟုတ်….
၄) Or ပြဇာတ်စင်သဖွယ် ပြင်ထားသော မီဒီယာ ဝင်ခွင့်မရှိ ပရိတ်သတ် မရှိ တရားရုံးးတွင် တေမိရှေ့နေ နှင့် ညွန်ကြားချက် ရ တရားသူကြီး တို့ ၏ အမိန့် ချမှတ်မှုတွင် ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်သော မောင်ဘချစ် ဘဝ ရောက်မည် ဖြစ်သည်….
၅) ဒါမှမဟုတ် အကြီးအကဲတို့ ကြောက်ရွံ့ ရသော အိမ်နီးချင်းး နိုင်ငံမှ ဖြစ်မူကားး ၈ ရက် အတွင်း လျော်ကြေးးတနင့်တပိုးပိုက်ကာ လွတ်မည်ဖြစ်သည်….
၆) အမြင်မတော်တာ မသင့်တော်တာ ဝင်ပြောမိသော ရွှေနိုင်ငံသားများးသာ ထောင်နန်းစံရမည်တည်းးးးး
Tom Hank ရဲ့ Bridge of Spies (2015) ကို အရသာရှိရှိ မကြည့်နိုင်..
လူ့ အခွင့်အရေး နဲ့ လူသားချင်းလေးစားမှု
ကိုယ့် အလုပ် တာဝန်ကိုယ် ကျေပြွန်မှု
တခြားသူရဲ့ Profession ကို လေးစားမှု
ကြီးနိုင်ငယ်ညှင်းမရှိမှုတွေ ကို တွေးးမိတာပြောပါတယ်…
အချိန် ၂ နာရီခွဲလောက်များးရရင်လေ…
ဒီရုပ်ရှင်ကို တစ်ယောက်ထဲ ကော်ဖီလေးး လက်ဖက်အုပ်လေးးနဲ့ ဇိမ်ရှိရှိကြည့်ကြဖို့ညွှန်းချင်သဗျာာာာာ…
ဇာတ်အေးးပါ.. ဒါပေမယ့် အနည်းဆုံးး Branded မင်းသားကြီး တွမ်ဟန့် ကားးမို့ နဲ့ အများဆုံးး အထက် ကအချက်လေးတွေ ပေါ်မူတည်ပြီးး သူများနိုင်ငံတွေ ရဲ့ ဥပဒေနဲ့ management လေးတွေ သိရတာပေါ့… ကိုယ့်ဆီမှာမှ မမြင်ဖူးးပဲဟာာ နော့…!!!
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) says: ကျိဖူးဘူးတော့
ခင်ဇော် says: မနှစ်ကမှ ရုံတင်တာ…
ဘီအီး လေးး နဲ့ အမြည်းးလေးးနဲ့…
ဦးကြောင်ကြီး says: အောကား နီတခါမှ ရေးဖူးဗူး…. မြေးရဲဒါလား အခြင်ယောင် စောင်တာယား။
ခင်ဇော် says: အာ့ဒါ
ဂျက်စပဲရိုး says: အဲ့ဇာတ်ကား ဒေါင်းထားပြီးသား ရှိတယ်။
ကြည့်ဖို့ကို မိုးကမအေး ကော်ဖီက မပူ အချိန်က မရ တာနဲ့ မကြည့်ရသေးတာ။
ခင်ဇော် says: ဇာတ်အေးးး ဟ။
နာက သူ့ကားတိုင်း တစ်ရှူးဆောင် ရ ထပြေးရ ဒိုင်ယာစီပင် သောက်ရမို့
ဒီလို ဇာတ်အေးပုံမျိုး တခြား မင်းသားဆို မကြည့်ဘူးးး
ခုက အနေတော်ပဲ။ ဇာတ် လမ်း အနိမ့်အမြင့် အတက်အကျ မရှိလှပဲ တစ်သမတ်ထဲသွားပြီး အမူအရာ အသေးစိတ်လောက်ပဲ ကြည့်ရတာ။
Kaung Kin Pyar says: မမဂျီး ပြောသွားတဲ့ Channel Myanmar မှာ တင်ထားတယ်၊ ကောင်းတယ်၊ ဒေါင်းကြည့်ဆိုတဲ့ကားလေးက ဘာနာမည်လဲဟင်… မေ့သွားလို့..
No Strings Attached (2011) ရုပ်ရှင်ထင်တယ်။
Thint Aye Yeik says: Bridge of Spies (2015) ဒီကားပေါ့ဗျာ…….. ။
ဒေါင်းရမယ့် လင့်ခ်က… ဒါ https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZBXp4Zdoa2ilDGlF7vXJ0NMwb5OHR8a5z7 ပေါ့ဗျာ…
.ဒေါင်းလို့ရရင်တောင်… ကြည့်ဖို့က အချိန် သိပ်မရဘူးပေါ့ဗျာ…
.ကြည့်ရဦးမယ့်ဇာတ်ကားများစာရင်းထဲ… တို့ ထားမယ်ပေါ့ဗျာ..
အောင် မိုးသူ says: ဒေါင်းနေပြီဟေ့ Movie Program မှာ ထည့်ပြောရမလားလို့ ကြည့်လိုက်ဦးမယ်။ ထည့်ပြောရမယ့် ဇာတ်ကားလားလို့ ရီကောမန့်ပေးပါဦး။
ခင်ဇော် says: ဘယ်ရှု့ထောင့်က ပြောမယ်ရွေးးတတ်ရင် ပြောစရာများးတယ် .. ဟိ
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: .၀ယ်ကျိဦးမယ်
ခင်ဇော် says: ကြည့်သင့်တယ်..
kai says: …. ဆိုဗီယက်စပိုင်ရဲ့သရုပ်ဆောင်ပုံကိုပိုကြိုက်တယ်..။
ကျုပ်ကတော့.. ဒေါ်လှ၂၀ပေးပြီး.. ရုံမှာသွားကြည့်ခဲ့တာ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ခင်ဇော် says: အာ့ကြောင့်
မနေ့က အဲ့ဘိုးးတော် အော်စကာ ပိုက်ရသလေ.. စပိုင်ပီသတယ်ခေါ်တယ်..
ဒီခောတ်စပိုင်တွေလို ဆပ်စလူးးနတ်ပူးးနေတဲ့ အမူအယာ မဟုတ်တာတော့ မှတ်မှတ်ထင်ထင်ပဲ..
kai says: တိန်… ခရီးထွက်နေသမို့.. သိတောင်မသိလိုက်..
Mr. MarGa says: ပြောပါသော်ကော
ကောင်းပါတယ် ကြည့်ကြည့်ပါ ဆိုတာကို
ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ် စာတန်းထိုးမပါဘူး ဘာညာ နဲ့ ဝေ့နေတာလေ
ခင်ဇော် says: သူ့ ကားးဆိုထဲက
ဘယ်သူ ညွှန်းးညွှန်းးး မညွှန်းးညွှန်းး
Sooner or later ကြည့်မှာပဲလေ…
နိ ကြည့်ခိုင်းးတုန်းးက နာ ရန်ကုန်မှာလေ..
မကြည့်နိုင်ချိန် ဇွတ်လာညွှန်းးတဲ့ သူ အပြစ်..
မောင်ဘလိူင် says: အညွှန်း​ရေးဖို့ တို့ထားတဲ့ ဇာတ်​ကား​ကောင်း တစ်​ကားပါ ?
ခင်ဇော် says: သိပါ့ဗျာ။
အမညွှန်းရင် ပေါ့ရွှတ်ရွှတ်ဖြစ်မစိုးလို့ ဘာမှကို မပြောတာ။